Osaziwayo bachazwa uzime wakuleli ngokuthweswa iziqu
UZIME wakuleli, uShudufhadzo Musida, osanda kwethweswa iziqu kwenye yamanyuvesi akuleli Isithombe: SITHUNYELWE
OSAZIWAYO balokhu bembongele njalo uzime wakuleli abamthatha njengesibonelo esihle entsheni kulandela ukwethweswa iziqu kwenye yamanyuvesi. UShudufhadzo Musina wethweswe iziqu zeHonours kwi-International Relations yiNyuvesi iWitwatersrand. Lokhu kwenzeke ngesikhathi esinzima njengoba ukufunda nokufundisa kungasefani kulandela ukuhlasela kobhubhane lweCovid-19.
UBasetsana Kumalo uthe kuningi okuhle izingane zabo ezingafunda kuye. "Angazi noma ngikhale, uyithemba lekusasa lezingane zethu, zizobukela kuwe. Ngiyakubongela ntokazi enhle. Siyabonga nangokuthi uyogqoka ijazi nesicoco sakho," kusho uBasetsana.
UKayise Ngqula naye umshayele ihlombe lo zime wathi nakanjani ungowesifazane ovelele nazibona enguye emphakathini. UShudufhadzo uthe ukuhlasela kobhubhane bekuhambisana nezikhathi ezinzima kuwona wonke umuntu. Ukhuthaze abafundi ukuthi bayibambe kunzima, wathi abaqhubekele phambili wabongela nozakwabo abethweswa nabo iziqu.
Lo zime uthweswa lezi ziqu nje, ubesanda kuqala uhlelo olukhuluma ngezifo zengqondo ezinkundlezi zokuxhumana nalwenza njalo ngoMsombuluko ngokubambisana nezinhlangano ezahlukene okubalwa neSA Depression and Anxiety Group (Sadag). Yize abantu bebe nemibuzo nemibono ehlukene ezinkundleni zokuxhumana mayelana neziqu zakhe, uvele wakushaya indiva lokho wagxila kokuhle.